ngempucuko yesimanje lobuchwepheshe Kunzima ukucabanga ngaphandle steel. amamaki ezahlukene le nto asetshenziswa cishe noma kuphi. Kusukela ke kwenziwa njengoba abavamile yasendlini izinto, futhi amathuluzi eziyinkimbinkimbi. Kodwa kuhle steel - Nokho kuyinto ingxubevange zensimbi carbon, njengoba insimbi yokusakaza. Futhi ukuze uwahlukanise kuphela iphesenti C2. Okusho ukuthi, uma ingxubevange lingaphansi kuka 2.14% carbon, lokhu kuhlinzwa, futhi uma ngaphezulu - isivele inkatho. Kodwa eqinisweni, steel ngasinye siqukethe ukungcola ezehlukene ezifana Silicon, phosphorus, isibabule futhi manganese. A Metallurgical ngokungeza nalokho izici eziningana ezinjengolwazi chromium, manganese, molybdenum, nickel, i-tungsten vanadium ngokushintsha okuqukethwe iphesenti izakhi alloying ne-carbon, esikhiqiza lemikhiqizo letehlukene lokhu ingxubevange ukuthi kuhluke kakhulu izimfanelo zabo.
Kule ndaba, basuke doped ne-carbon. Futhi izinga steel carbon (ehlanganisa kuphela carbon nensimbi) kuncike inani C2 therein. Okusho ukuthi, uma i ingxubevange enjalo iqukethe kuze kufinyelele 0.3% carbon, ubizwa ngokuthi yensimbi esithambile noma lwezobuchwepheshe. Lensimbi iphesenti okuqinile kwalesi sakhi ungaphakathi uhla 0,3-2,14%. Kodwa ngamunye emabangeni ka-ingxubevange has injongo yawo. Ngokwesibonelo, yensimbi commercial has a ductility high, hhayi lukhuni, zakhiwa kalula, ashiselwe waligingqa emakhazeni nasesimweni sokungasokwa ashisayo. Ngakho-ke, steel omnene - kuqhathaniswa ongaphakeme impahla Izindleko izingxenye ezahlukene hhayi imithwalo.
brand Obuqand ingxubevange ziye zasetshenziswa ezinye izinjongo. Ngokwesibonelo, abaningi savvy ubuchwepheshe abantu bazi lokho GOST steel 45. Lokho okungukuthi, ingxubevange iqukethe 0.45% carbon. Lokhu kuhlinzwa isivele kungenzeka kalit, bese ngcono inqubo isitokwe ukususwa. Kusukela emva ngcono ukwenza imininingwane efana izinduku yokuxhuma, crankshafts, flywheels, indandatho amagiya, imiphini nezihluthulelo nokunye okunjalo. ke futhi unekhono ukuvundulula lukhuni esebenzisa imvamisa high. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba akhiqize therefrom amagiya, imiphini eside nokushayela, isb izingxenye okufanele babe okusezingeni eliphezulu ebusweni ubulukhuni futhi okusezingeni eliphezulu bafake ukumelana at ukusonteka ongaphakeme.
Ngo ababeqondisa esetshenziswa kabanzi ingxubevange-chrome steel. Lena indaba for yokukhiqiza ephezulu amandla izingxenye ezisebenza at imithwalo ongaphakeme. i ingxubevange enjalo kunzima ukuba ashiselwe, idinga Ukushisa kanye nokwelashwa okwalandela ezishisayo. Ngakho, ngokwesibonelo, kusukela ngensimbi 40X ukwenza imiphini, enama-asi, izinduku, pistons, pinion imiphini, nokwakha uthi lokuphotha amasongo. Kuyinto efanelekayo umkhiqizo cam kanye crankshafts, izinduku, mandrels, bushings, igiya nezinsimbi kanye nezinye izingxenye ukunemba.
Futhi kabanzi futhi ukugqwala ukumelana noma insimbi engagqwali. Lolu phawu ezifana 40 X 13, 30 X 13, 12 X 13, nabanye abaningana. Lezi Alloys kukhona ukwaziswa esithela tonnage futhi ukusika amathuluzi, izinto zasekhaya, carburetor izinaliti, iziphethu nezinye izingxenye ezifana ukuthi usebenze ezindaweni onakalisayo at okushisa afinyelela ku-degree 450. Lensimbi efana ibhola ebizwa ShKh15 ucingo. Futhi ngenxa yokuthi kwenza plungers, plunger emikhonweni, Saddles umjovo valve ngokwabo kanye ezinamasondo valve rocker, sprayers, kanye nezinye izitho zomzimba ukuthi kumele babe ubulukhuni okusezingeni eliphezulu, amandla kanye ukugqoka ukumelana naye. Ngokuvamile, uma oyifunayo steel isitembu ingacosha nganoma iyiphi injongo.
Boeing 767 esibhakabhakeni emhlabeni wonke
Brandy Factory "Temryuk": izinga, kungase kutholakale eminyakeni
Rosin - kungcono izinto ezithakazelisayo kakhulu
Egwadle Ural: Ukukhiqiza, imikhiqizo, ukubuyekezwa
Isidlo Anhlobonhlobo - amazambane Casserole nge inkukhu
Tattoo Conor McGregor, ukukhanya, nobudlova fighter Irish
Vuselela rate - okuyinto engcono? Uyini imvamisa kwesikrini ukubeka
Kungani eziqhakaza Clivia? Izizathu eziyinhloko
Utamatisi e gelatin ngaphandle inzalo. ukupheka zokupheka